नगरपालिकाको बेवास्ताले कुहिएको पाँच हजार केजी चामल । अहिले यो कुहिएको चामल मासिक दुई हजार भाडा तिरेर राखिएको छ । तस्बिर चिरञ्जीवी घिमिरे/नयाँ पत्रिका
२०७८ बैशाख २५ शनिबार १४:५८:००
कुहिएको चामलबारे जनप्रतिनिधि बेखबर, फाल्नुपर्ने चामल राख्न दुई हजारको कोठा भाडामा
झापाको गौरादह नगरपालिकाले जनतालाई राहत दिन किनेको पाँच हजार केजी चामल गोदाममै कुहिएको छ । गत वर्ष नगरपालिकाले खरिद गरेको चामल जनतालाई दिन नपाउँदै कुहिएको हो । गत वर्ष कोरोना महामारीका समयमा भएको लकडाउनका समयमा जनता भोकै पर्दा नबाँडी राखेको चामल कोदाममै कुहिएको हो । पानी चुहिने भवनमा स्टोर गरेर राख्दा ठूलो परिणामको चामल कामै नलाग्ने भएको छ ।
नगरपालिकाको बेवास्ताका कारण पाँच हजार केजी चामल नष्ट भएको छ । उक्त चामल नगरपालिकाले ३८ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले खरिद गरेको थियो । नष्ट भएको चामलको मूल्य एक लाख ९० हजार पर्न जान्छ । ‘पाँच हजार केजी चामल कुहिएको छ । यो काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ गौरादह नगरपालिकाका स्टोर प्रमुख अर्जुनभाइ दाहालले भने, ‘केलायो भने केही चाहिँ काम लाग्ला कि ! तर, त्यो पनि भन्न सकिन्न । त्यसै त खान सकिँदैन ।’
चामलसँगै १५ बोरा भुजा पनि छ । त्यो भुजा पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको दाहालले जानकारी दिए । नगरपालिकाले गत वर्ष वडानम्बर–१ स्थित पुरानो सरकारी सहकारी भवनमा यो चामल स्टोर गरेर राखेको थियो । भवन जीर्ण भएको थियो । त्यही कारण चामल कुहिएको उपप्रमुख गीता भेटवालले जानकारी दिइन् । तर, कति परिणाममा चामल कुहिएको छ भन्ने जानकारी जनप्रतिनिधिलाई समेत छैन । ‘व्यवस्थापन भइसक्यो । काम नलाग्ने चामल फालिसक्यो भन्ने जानकारी आएको थियो,’ भेटवालले भनिन्, ‘तर, त्यत्रो पाँच हजार केजी त हैन होला ? ताततातै प्याकिङ गरेर चामल ल्याइयो । पछि पानीले भिज्यो । अनि चामल बिग्रिएको हो ।’
बिग्रिएको चामल राख्न पनि नगरपालिकाले भाडाको सटर लिएको छ । यसअघिको भवनमा विगतदेखि नै ब्याडमिन्टन खेल्ने गरेका थिए । चामल राखेका कारण खेल्न नपाइएकाले स्थानीयको आग्रहमा त्यहाँबाट चामल हटाएर भाडाको घरमा कुहिएको चामल राखिएको छ । कामै नलाग्ने चामल राखेबापत नगरपालिकाले उक्त सटरको दुई हजार तिर्नुपर्छ । जनतालाई राहत दिन खरिद गरिएको चामल जनतालाई भोकै बनाएर गोदाममा थन्काइएको थियो ।
आवश्यकताभन्दा बढी चामल खरिद गरेर लाखौँ रकम नस्ट पार्ने जनप्रतिनिधि भने कुहिएको चामलका बारेमा बेखबर छन् । एक लाख ९० हजारको चामल कुहिएर नस्ट हुँदा पनि नगर प्रमुख रोहितकुमार साह आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । मलाई स्टोरबाट जानकारी आएको छैन । बिहान म अफिस जाँदा पनि जानकारी पाइन,’ उनले भने, ‘मैले चामल बिग्रेको देखेकै छैन । बोरा उठाउँदा दुई÷चार केजी झरेर बिग्रिएको होला । अरू मलाई चाहिँ जानकारी छैन ।’
जनता भन्छन् : नगरपालिकाले हामीलाई दिन कजुस्याइँ गर्‍यो, कोदाममै कुहाएर फालेछ
झापा गौरादह–२ दलुका सुकुम्बासी प्रिति हस्दालाई गत वर्ष लकडाउनका समयमा पहिलो चरणमा नगरपालिकाले राहत दिएन । कारण उनी अर्काको अधियाँ खेती गर्थे । उनले त्यसवेलासम्म अधियाँ गरेर ल्याएको धान सकिसकेका थिए ।
तर, नगरपालिकाले उनलाई सम्पन्न देख्यो । घरमा खाने चामल नै नभएपछि नगरपालिका गएर हात फिजाए । उनलाई बल्ल–तल्ल राहत पाए । तर, दश केजी चामल ।
‘१० जनाको परिवारलाई दश केजी चामल त हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो मात्र भएको थियो । कति दिन त भोकै बस्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसवेला नगरपालिकाले हामीलाई चामल दिन कजुस्याइँ गर्‍यो । तर, अहिले कुहाएर फालेछ । त्यो वेला हामीलाई दिएको भए केही छाक त टार्ने थियौँ ।’
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यो समयमा मजदुरले काम पाउन छाडेका छन् । रोजगार गुमेसँगै दलुका सुकुम्बासी भोकै पर्ने खतरा छ । ‘कामबाट निकाली सके । काम नगरी बसेको तीन दिन भयो । घरमा भएको सकिन लाग्यो,’ दलुका सुकुम्बासी मुन्सी हस्दा भन्छन्, ‘पोहोर साल पनि कति दिन त भोकै बसियो । नगरपालिकाको ताल यही हो । यसपटक पनि कति लकडाउन हुने हो । हाम्रोचाहिँ बिजोग हुनेभयो ।’
गौरादह नगरपालिका परिसरमै पुरियो कुहिएको चामल
गौरादह नगरपालिकाले एक सय १५ विपन्न परिवारलाई बाँड्यो कुहिएको चामल र दाल
चामल, दालजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु तीन महिनालाई स्टक छ : विभाग
सिराहामा प्रदेश २ कै आधुनिक चामल उद्योग सञ्चालन, ४० करोड लगानी